Ndingazi njani ukuba andinalo umqhubi ke yephepha-mvume. Njani umngeni i-deprivation ka-umqhubi ke yephepha-mvume - Zonke abaqondisi-mthetho ehlabathini! Isemthethweni rock kunye abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Ndingazi njani ukuba andinalo umqhubi ke yephepha-mvume. Njani umngeni i-deprivation ka-umqhubi ke yephepha-mvume
Ngoko ke, makhe nokuchaza lo mbuzo thoroughly
Baninzi abaqhubi umfanekiso zibuze: 'Njani ndiyazi ukuba ndiza deprived ka-umqhubi ke yephepha-mvume.' I-traffic amapolisa ekhutshwe a specialized inkcazo kwiqela ukungazibandakanyi ka-motorists' amalungelo
Mhlawumbi wonke umntu uyayazi ukuba ixesha deprivation yamalungelo iqala xa-matyala isigqibo uba kakuhle.
Kude kube lelo xesha, umqhubi deprived yamalungelo ayikho mbasa.
Kodwa traffic amapolisa, lowo kufuneka surrender i-yethutyana mvume. Lo essence ka-oludlulileyo iinkcazelo ukuba Russian Isebe Kubulungiseleli ye-Sangaphakathi, ukuqinisekisa ukhuseleko ezindleleni, sele transferred kwi-jonga zesingesi. ka-Code of Administrative Offenses. Ithi malunga uxanduva lokuqhuba umqhubi kwi-kwimo intoxication, ingakumbi ukuba eso umqhubi lacks amalungelo okanye deprived kubo. Luxanduva kuba oku substantial: ukuya kwi- imihla arrest. Kufuneka kuqatshelwe ukuba babekho iimeko xa umqhubi drove imoto kwi-kwimo intoxication kwaye waba ezifunyenweyo. Kwaba ifumanise ukuba offender ubani yethutyana mvume ezikhoyo kwi-exchange kuba amalungelo kuba kwicandelo elikhethekileyo xesha kuba edlulileyo offense, kodwa elidlulileyo meko ixesha deprivation alifumanisanga kanti bangena umkhosi.
Inspectors, ngokunjalo lwabagwebi ukusuka zabo filing, bafuna ukulima enjalo bangonwabanga grudge.
Kunjalo, deprivation ka-umqhubi ke sephepha-mvume sibonwa kunzima umbuzo. I-the new iinkcazelo Yombuso Traffic Ukhuseleko Inspectorate kubalulekile precisely kuchazwe ukuba xa kokuqwalasela kwiimeko ezinjalo kunye ntaba abaqhubi umfanekiso kuyimfuneko ukuba kuthathwe ingqalelo nokuba isigqibo malunga wangaphambili utyeshelo lomgaqo-ukusebenza okanye hayi. Kwaye akuvumelekanga ukuba ngoko ke kubalulekile loluphi uhlobo utyeshelo lomgaqo-kwaba. Mhlawumbi umqhubi drove ukuba oncoming lane, mhlawumbi liwudlule isantya okanye nje drank e ivili. Kodwa ukuba isigqibo alifumanisanga bangena umkhosi, ngoko ke omtsha mthethweni intshukumo izimisele yi-inxalenye enye efanayo inqaku (.). Kwaye oku kuthetha ukuba iphepha-mvume lokuqhuba ingaba inkangeleko kuba omnye kunye necala okanye emibini. Kule meko, confiscation ixesha kuqala ukususela ngomhla ugqibo yokuphulukana ixesha phantsi edlulileyo isohlwayo. Isigqibo inkundla kuqala isehlo acquires amagunya kuphela emva kokuba iintsuku ezilishumi, eziya wanika kuba isibheno. Kodwa inkundla isigqibo malunga isibheno bamkeleke ukususela mzuzu yayo umntwana ongamzalanga abe ngowakho. Umzekelo, inkundla confiscated ukususela umqhubi ilungelo ukusela.
Kwaye omnye kunye grief onayo antonio kwaye kwakhona sat ngasemva ivili.
Kunjalo, uya kuba ilungelo kuphela emva kokuba iintsuku ezilishumi. Kwaye ngoku waye ibambe antonio lokuqhuba. Kodwa umqhubi akekho mbasa ukuba uya kubandezelwa ilungelo lakhe umqhubi ke yephepha-mvume. Kuba oku banako yandisa ixesha seizure, kodwa azinazo ilungelo arrest kuye. Kwaye yintoni na ezinye iimeko ingaba deprivation kuqhubeka umqhubi ke yephepha-mvume. Ukuba umqhubi isebenza isithuthi le uhlobo, kuba oko athe ayina amalungelo wakhe amalungelo, kanjalo antonio. Ke yena (ukongeza confiscating yakhe amalungelo) kanjalo iyonela kububanzi bephepha a kakuhle ka, rubles phantsi inxalenye Inqaku. ka-Code of Administrative Offenses, kodwa hayi arrest. Ndingazi njani ukuba ndiza ilahlekile umqhubi ke isifundo? Oku perennial umbuzo. Makhe kuqala nokuchaza i ngokwemiqathango yecandelo iyasebenza ka-yethutyana amaphepha-mvume ukufumana phandle nokuba ngaba kumele nikezelwa.
Basically, siza thetha ne-Part Inqaku
Ezi amaxwebhu zi iindidi ezimbini. Yokuqala ngu ekhutshwe kwigovernment kubuyela kuba omnye ithathwe ngethuba le ngxelo, yesibini - endaweni seized kuba ixesha yeenkqubo. Lokuqala precedent, traffic amapolisa amagosa abo lumisiwe umqhubi kuba utyeshelo lomgaqo-ekuboneleleni kuba i-somthetho sokukhululwa ezifunekayo ukuze confiscate sexeshana mvume. Kwisahluko sesibini abamele benze oku. Kwaye emva kokuba inkundla isigqibo acquires isemthethweni umkhosi, kuyimfuneko kuba umntu ukuba isandla sakho phezu enjalo imvume ngokwakhe.
Kungenjalo, ixesha deprivation kuya kubalwa kanye kanye ukususela kwixesha yethutyana iphepha ngu akhululwe.
Kwaye ukuba umntu ayibuyi ngayo kwaye emva kokuba inkundla isigqibo uba kakuhle.
Kwaye ukuba grief-umqhubi ziphantsi ezandleni uvimba s. Kule meko, uya kuba ukuba kuba noxanduva ukulawula car kwaye emva confiscation yamalungelo. Kwaye ukuba ithetha i-arrest ka-elinesihlanu imihla. Kodwa ukuba oluntu uvimba s akazange arhoxe amalungelo. Kwaye ukuba inkundla isigqibo yaqalisa umkhosi, traffic amapolisa akazange nkqu zama ukuba arhoxe kwabo kulo nyaka. Kule imeko, isigqibo malunga confiscation yamalungelo ayikho enforceable, ngenxa yokuba statute ka-kwezixhobo zokusebenza iphelelwe lixesha. Kutshanje, abanye violators zithe ukuzama cheat Baya ayisasebenzi buza nabani na indlela yokufumana phandle ukuba ndinguye deprived ye wam umqhubi ke yephepha-mvume.
Abaninzi ngokulula ikhethe ukutshintsha yabo yokugqibela igama emva ekubeni deprived.
Oku nuance oninika ithuba re-uqeqesho kwaye okokuba ngasekunene. Kodwa omtsha clarification lubonisa ukuba ukutshintsha igama akusebenzi ngaphandle kwenu ukususela eyimali.
Kwaye wangaphambili amalungelo kufuneka ibe sele idlule.
Kuya kwenzeka ntoni ukuba umqhubi efumana kwi-i-kunokwenzeka ingozi isiphumo apho umntu uyafa.
I-culprit ngu-beka ngasemva iinkwenkwezi.
Amalungelo sukubonisa kuye, abakho wathi, nantoni na malunga zabo elimfiliba.
Yena akakwazi kwazi apho zinjalo kwaye icela zilandelayo umbuzo:"Ndingubani mna ezilahlekileyo wam umqhubi ke yephepha-mvume."Kwiindawo ezinjalo iimeko, baye baguqukele a lawyer abo baya kukuxelela njani ukufumana amaxwebhu inzala. Kwaye u-okokuqala uza unakekele yokuba umqhubi sele wayenolwazi linge. Kwaye ukuba akukho nto kwathiwa kwi-isivakalisi ka-deprivation, oko kuthetha ukuba umqhubi alifumanisanga ezilahlekileyo ilungelo ulawulo imoto. Kwaye apho amalungelo ngabo, ufuna ukucacisa. Le end, inkundla iya kunikela umqhubi ukuba uqhagamshelane traffic amapolisa okanye investigator abo ihlole ityala."Ndingazi njani ukuba ndinguye deprived wam umqhubi ke yephepha-mvume."Kwaye ukuba baya undixelele ukuba bamele deprived, njani ukufumana kwabo umva."- le mibuzo nkxalabo ezininzi luphumelele abaqhubi umfanekiso. Abaninzi lwabagwebi kuthi ukuba useless ukuba isibheno isigqibo, akunakwenzeka ukuba rhoxisa isigqibo. I-secretaries kwaye druid lwabagwebi zibalisa zabo superiors. Baya buza:"Kungani kufuneka oku. Nakuba kunjalo, uza uya kubandezelwa ilungelo lakhe amalungelo."Akukho incopho kwi nayo abaqondisi-mthetho, ngenxa confiscation yamalungelo azinako wacela ukuba kukho protocols. Abanye car abanini-mhlaba emva usebenzisa ikhompyutha yi-zeenkundla ukuba deprive kwabo wamalungelo ukuba drive ngokuzenzekelayo hire abaqhubi umfanekiso.
Ngamanye amaxesha baba nkqu jika yomamkeli yokuthenga ka-iimoto kwaye ngalo isithuthi. Emva koko, ezininzi musa drive Kodwa ukuba ujonga kwi ngaphezulu inkcukacha, ungafumana phandle ukuba nayiphi na inkundla isigqibo ngu disputed.
Zonke assurances ziijaji kwaye secretaries - unwise umzamo gcina ngokwakho kwi unwanted umsebenzi. Kuba umzekelo, i-efanelekileyo isivakalisi waba pronounced ngokuchasene nani. Kufuneka sele figured ngaphandle ngonaphakade figured ngaphandle apho yokufumana phandle ukuba ndinguye deprived wam umqhubi ke yephepha-mvume. Ngaba ekuvunyelwene ngalo i-verdict, wonke umntu ufumana ndonwabe kwaye ndonwabe. Kodwa ngaba abakho ndonwabe Kwaye wena wenze isigqibo isibheno kuyo. Kodwa secretaries nabagwebi iya kuba ukwenza tremendous isixa-mali umsebenzi. Endleleni, ukuze ube unelungelo lokufumana i-jury ukuba ufake isikhalazo ngokuchasene traffic amapolisa amagosa, kuza kufuneka uqhagamshelane abaqondisi-mthetho. Kubalulekile ngenxa yesi sizathu ukuba izicaka Themis profitable, ngoko ke ukuba izigqibo asingawo appealed.
Ngabo kakuhle aware ukuba uninzi abaqhubi umfanekiso kuba akukho unye njani umngeni deprivation yamalungelo kwaye sebenzisa le ignorance.
Baninzi abaqhubi umfanekiso onomdla kuso zilandelayo:"Njani ndiyazi ukuba ndiza deprived wam umqhubi ke isifundo kwi-intanethi."Indlela yokufumana phandle."Ukuba kwakungekho inkundla, ngoko abazange deprived yamalungelo. Kwi-Intanethi, i-intanethi, lo mbuzo ayifumaneki ngaphandle ngayo nayiphi na indlela, kungenxa yokuba strictly ziyimfihlo ulwazi.
Indlela kuqulunqa kwaye ifayile isicelo kunye prosecutor ngu-ofisi. Ingxelo prosecutor ngu-ofisi ngomhla we-inaction. Ifomu yokufaka isicelo kwi-prosecutor ngu-ofisi. Isicelo sakho prosecutor ngu-ofisi kuba umqeshi
NESREĆA - Zakoni Nesreće